Bannaanbax lagu taageerayo Falastiin oo ka dhacay Gineva. - Jubbaland TV
By Sabriye Soomaali May 20, 2018 372 No comment
Boqollaal dad ah ayaa maalinimadii shalay si nabad ah isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva,kuwaas oo doonayey in midnimo laga yeesho dhibaatooyinka Falastiiniyiinta ka heysta ciidamada Isra’il ee dhanka marinka Qasa.
Bannaanbaxcaasi ,waxaa soo qaban qabiyay,qeybo badan oo ay ku jiraan ururada aan dowliga aheyn,Isbaheysiga caalamiga ah ee ururada xuquuqul aadanaha iyo kuwo kale oo u xilsaaran ka hortagga jirdilka iyo la socodka dhibanayaasha,waxaana isu soo baxaasi taageeray illaa 20-ka mid ah ururada aan macaash doonka aheyn,sida Cojep International oo fadhigeedu yahay Switzerland .
Isu soo baxaasi waxaa dadkii ka qeybgalay ay ku cambaateeyeen xasuuqa Isra’il ay u geysteen dadka reer Falastin,waxaana loogu baaqay Qaramad a Midoobay iyo ururada Caalamiga ah in ay qaadaan falal dhan ka ah Isra’il oo weli ku sii dhagan in ay sameyso rabshado xagga bini aadanimada ah.
Dadkaasi oo watay boorar,waxa ay ku qeylinaayeen”Fakastin ha xorowdo,Isra’il waa argagixiso,waxayna sidoo kale ugu baaqeen Isra’il in ay joojiso tacadiyada,isla markaana ogolaato in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilkii ka dhacay Qasa
Kumannaan qof oo ka qaxay colaad ka soo cusboonaatay dalka Myanmar